Mey 30, 2018 Admin
$180M varotra manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Tsidiho ny momba ny fizarana eo amin'ny bilaogy Raha mila fanazavana fanampiny momba ny Kraken Daily Market Report Eto
Zavatra fampiharana ny lalàna nahazo $ 14M avy amin'ny fivarotana nisambotra cryptocurrency
Ny manam-pahefana alemà vao natao manodidina $10 tapitrisa avy amin'ny fivarotana ny Bitcoin fa nosamborin'ny amin'ny famotorana heloka bevava. koa, dia nanao fanampiny $4 tapitrisa avy amin'ny fivarotana hafa cryptocurrencies.
Ny cryptocurrencies lafo anisan'ny 1,312 BitCoins izay ny ankamaroany keriny tao amin'ny famoretana teo amin'ny sehatra atao hoe LuL.to, izay tsy ara-dalàna mivarotra ebooks zon'ny mpamorona sy ny audiobooks amin'ny tena vidiny mirary. Ny toerana dia nosamboriny ka voasakana tamin'ny Jona, Nosamborina ny mpandraharaha sy ny fananany niditra tao amin'ny tahirim-bola izay matetika ampiasaina ho an'ny mpitandro filaminana Loharanom-.
Ny fivarotana nitranga nandritra ny roa volana, ao amin'ny andian-mihoatra ny 1,600 varotra eo amin'ny sehatra ara-barotra cryptocurrency alemà.
AIgatha crowdsale daty efa nambara
AIgatha crowdsale manokatra amin'ny 5. Jun 2018. AI Service Platform mifototra amin'ny marimaritra iraisana System
AIgatha dia nozaraina computation fampandrosoana sy ny solon-tsaina bebe kokoa noho ny taona maro, ny ankamaroany izay ampiharina amin'ny fikarohana akademika. Ankehitriny dia manambatra azy amin'ny blockchain hamorona iray hafa teknolojia vaovao rehetra. Izahay no manao ezaka mba popularize teknolojia avo, fampitaovana ny olona amin'ny fanatanterahana ny fahafahan'ny creativities, mampitombo ny velona ny olona kalitaon'ny, ary boosting ny fampandrosoana ny sivilizasiona manerantany.
331 Zavatra crypto nanambara mpampiasa vola $ 1m na mihoatra amin'ny tombony amin'ny 2017
The National Tax Agency ny Japana dia nitatitra fa 331 avy tao an- 549 crypto olona voasoratra anarana mpampiasa vola nahazo mihoatra noho ny 1 tapitrisa dolara in tombony tamin'ny fandrantoana virtoaly vola.
Ny hetra ekipa niandraikitra ny fanadihadiana nilaza fa ao 2017 crypto hetsika ara-barotra miaraka Bitcoin vola tombony mba hampitombo ny harin-karena faobe ny Japana 0.3%
Previous Post:Inona no mpamatsy vola cryptocurrency Nanoro hevitra ny mivarotra, ary izay olona mitandrina?
ny hoy i: